नेपालमा फस्टाउँदै पुरुष वे श्या ल यः कति कमाउन पुरूष वे श्या ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ प्रमुख समाचार/नेपालमा फस्टाउँदै पुरुष वे श्या ल यः कति कमाउन पुरूष वे श्या ?
पोखरा । लवाई खवाई नै फरक छ । देख्दा हट्टाकट्टा पनि छन । कुरा गराई पनि फरक छ पोखराका २८ बर्षिय मनोज क्षेत्री ९नाम परिवर्तन०को गेटअप हो यो । शहरका पुरुष यौ नक र्मी उनको सम्प र्कमा हप्तामा ४र५ जना महिला आउने गर्छन । उनीहरुसंग यौ न स म्पर्क पनि हुने गर्छ । धेरैजसो पनि दोहोरीन्छन। अधिकांश महिला उनलाई खोज्दै आउछँहरु भने कतिपयलाई उनी पट्याउँछन् ।
हरेक दिन उनको भिन्दै तवरले बित्छ । समय मिलाएर उनीहरुसंग यौ न सम्प र्क गर्ने गरेको उनले बताए । मोवाइलबाटै सबै कुराकानी हुने र भेट हुने उनको भनाई छ । उनीहरुले सामान्यदेखि महंगा होटल बुक गर्ने गर्छन । कतिपय विबाहित महिलाहरुले भने परिवारका अन्य सदस्य नभएको मौका छोपेर घर अथवा डेरालाई नै उपयुक्त स्थान बनाउने गरेको पाइन्छ। विबाहित मनोजले छुट्टै व्यवसाय गरेपनि त्यो भने देखाउनको लागि मात्र हो । यौ न सन्तुष्ट बनाए बापत्त महिलाहरुबाट पाउने रुपैयाले नै उनलाई घर परिवार चलाउन तथा विभिन्न खर्च गर्नमा सहयोग पु¥याएको छ ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठमाथि कारबाहीको माग गर्दै रुपा सुनारले दिइन् सर्वोच्चमा रिट